बधाई ! एस.एल.सि फेल भएर बिनोद दुबई गए ,१ सय ६५ तले बुर्ज खालिफामा काम गरेर ‘ईञ्जिनियर’ बने ।
काठमाडौ : घुम्नका लागि दुबई जाने जो कोही बु’र्ज खालिफा चढेर मात्र फ-र्कन्छन्। नभए, यो टावर-लाई पृष्ठ`भूमि पारेर फोटो खिचा-उन त प्राय: कसैले छोड्दै’नन्।विख्या’त अमेरिकी आर्कि-टेक्ट ए’ड्रिन स्मिथले लिली नामक पुतली-बाट प्रभा-वित भएर यसको डि;जाइन गरेका थिए।
उक्त पुतली-को लय र संरचना बुर्ज खालिफा-सँग मिल्दो-जुल्दो भएको स्मिथले बताए:का छन्। युएईको दुबई-स्थित विश्वकै सबै-भन्दा अग्लो मानव नि’र्मित टावर बुर्ज खालिफा अहिले मध्य-पूर्वको व्यापा-रिक केन्द्र बनेको छ।बुर्ज खालि-फाको डिजाइन-अनुसार होटल, कार्या-लयदेखि अन्य व्यव;सायिक घ’राना त्यहाँ बसेका छन्।
यो एउटा महत्व;पूर्ण व्यापा-रिक केन्द्र भएको छ।बु’र्ज खालिफा बना`उँदा दिन र रात गरी दुई सि’फ्टमा ९ हजार बढीले काम पाएका थिए। यी काम’दार मध्ये कयौं नेपाली पनि थिए। पोखरा`बाट ‘लेवर’ भिसामा दुबई पुगेका विनोद`कुमार विक पनि एक हुन्।एसएलसी फेल भएर उनी विदेश हानि`एका थिए। अहिले विश्व`बजारमा विक्ने सिनियर स’र्भेयर बनेका छन्।पोखरा– २४ पामेका विनोद सन् २००३ मा दुबई पुगेका थिए।
भार-तीय प्र’हरीमा जागिरे बुवा र पोखरामा घर_जग्गा भएकाले कमाउ_नकै लागि विदेश जानु-पर्ने बा’ध्यता उन-लाई थिएन।एस-एलसी फेल भए-पछि साथी सर्कलले डो¥र्‍याएर उन-लाई दुबई पु¥र्‍याएका थिए।
पोखराको शितल मौसममा हुर्कि-एका विनोद जब युएईको विमान-स्थलमा ओर्लि’ए, त्यतिबे-लै छिटै घर फर्केर पढाइ-लाई निरन्त’ता दिने कसम खाए।विमानस्थलमा ओ’र्लिए`पछि त्यहाँको गर्मी’मा टिक्छु भन्ने सोच्नै सकिनँ। ६ महि`नामै फर्कन्छु र पढ्छु भनेर मन`मनै वाचा गरेँ,’ विनोद भन्छन् ।
त्यति`बेला के कामको लागि जाने भन्ने नै थिएन। दलाल`लाई पास`पोर्ट बुझाए`पछि उसैले भिसा मिलाउने र पैसा बुझाए`पछि विदेश जान पाइन्थ्यो। त्यसरीनै विनोद दुबई पुगेका थिए। दुबईमा उनले बि`सिक्स कम्पनीमा पूर्व`निर्धा’रित लेबरको काम गरे।काममा जोतिएका विनो`दको इमान र लगन कम्पनीले रूचायो। उनलाई सर्भे टि`मभको हे’ल्पर बनायो।
कम्पनीका मालिक डग हायसले विनोद`लाई नियालि`रहेका थिए। मन पराएका रहेछन्।यता विनोद`लाई निर्माण कम्पनीमा बाहिर ५० डिग्री`सम्म च’र्को घामको गर्मी उन`लाई खपिसक्नु थिएन।एक दिन मालिक`लाई घर फर्केर पढाइ अघि बढाउन चाहेको कुरा बताए। दुबईमै रहेका विनो`दका मामा रण`बहादुर विकले पनि उन`लाई भेटेर घर फर्केर पढ्न भनेका थिए। यही बेला मालि`कले १ महिना काम गर, तिम्रो पदो`न्नती र तलब बढाइ`दिन्छु भनेर विनोदलाई थामे।
नभन्दै १ महिना`पछि उनको पदोन्न’ती भयो, प्रोफे`सनल सर्भे हेल्परमा। तलब पनि बढ्यो।विनोदले काम गर्ने बि’सिक्स कम्पनीले विश्वकै अग्लो टावर बु’र्ज खा’लिफा बनाउने ठे’क्का लिएको थियो।बिसि`क्ससँगै सामसुङ र अरब टेकले यो टावर बनाउ`न संयुक्त रूपमा काम गर्दै थिए।प`दोन्नती पाएका विनोदलाई कम्पनीले बु’र्ज खालि`फामा पठायो।सन् २००५ देखि २००१० सम्म उनले त्यहीँ काम गरे।
कम्पनीले सन् २००८ मा त बुर्ज खालि`फाको १ सय १२ तला`देखि १२० तला सम्मको भुईं हेर्ने जिम्मा नै विनोद`लाई दियो। यति`बेला उन`लाई फेरी पदोन्नती गरेर कम्पनीले ‘असि’स्टेन्ट ल्या’ण्ड स’र्भेयर’ बनायो।बु’र्ज खालिफामा विनो`दलेझैं लेबर`देखि अन्य पदमा काम गर्ने अरू पनि नेपाली थिए। विनोद भने छिटो छिटो पदो`न्नती हुँदै गए।लेबर`बाट काम थालेर सर्भेयर बने।
जब सन् २०१० मा बुर्ज खा`लिफा बनाएर सकियो, दुवईका राजाले रातीको समयमा उद्घा`टन गरेका थिए। त्यति`बेला उनी त्यहीँ थिए।संसारको अग्लो टावर बुर्ज खालि`फामा कंक्रिटको मात्रै २ सय ६५ तला छ। स्टिल`समेत गरेर यसको उचाइ ८ सय २८ मिटर अग्लो छ।अ`सिस्टेन्ट ल्याण्ड सर्भेयर बनेका विनोद`लाई कम्पनीले बु’र्ज खालि`फाको काम सकिए पछि पनि जागिरबाट निकालेन। उल्टै अरू देशमा काम गर्न खटायो।
उनका बोस डग हायसले भारतको मुम्ब`ईमा ‘सेकेण्ड बु’र्ज खालिफा’ बनाउने टिममा उन`लाई राख्ने भनेका थिए।मुम्बईमा १४५ तले टावर बनाउने योजना`का साथ बोस`सँगै उनी`पनि मुम्बई आएका थिए। जब टावर बनाउन जमिनको काम सुरू गरे, यसका मालिक`हरूबीच वि`वाद भयो। मुम्बईमा बनाउने भनेको त्यो योजना अस`फल भयो।
विनोद`लाई उनका बोसले काम दिन सके`नन्।उनले अर्को कम्पनी सामसुङ सिएनटी इञ्जि`नियरिङमा सर्भे इञ्जि`नियरकै रूपमा जागिर लगाइदिए। उक्त कम्पनीले मुम्ब`ईमै ८५ तले र ५५ तले २ वटा टावर बनाउने ठेक्का लिएको थियो। त्यही`बेला उनले भारतको खुला विश्व`विद्यालयबाट सिभिल इञ्जिनि`यरिङमा स्ना’तक गरे।
खुला विश्व`विद्यालयमा अध्ययन फर्म भर्दा उनले आफू|लाई नेपालमा एसएल`सी फेलनै भनेका थिए । तर उनले बुर्ज खालिफा बनाउँदा पाएको सर्टि`फिकेट र अन्य कम्पनीको सिफा`रिसले काम चल्यो। उनले पढ्न पाए।सन् २०१५ मा २ वटै भवन बने, मुम्बई`को काम पनि सकियो।यी दुई भवन बना`उँदा उन`लाई कम्पनीले फेरि पदोन्न`ती गरेर सर्भे इञ्जिनियर बनाइ`सकेको थियो।
यता पहिले काम गरेको कम्पनि बिसिक्स कम्पनी`का मालिक डग हायस निरन्तर उनको सम्पर्कमै थिए। मुम्बई`को काम सकिएपछि उनलाई अर्को टावर बनाउने काममा डग हायसले काज`किस्तान खटाए।सन् २०१५ मा काज’किस्तान पुगेर विनोद अरब टेक कम्पनीमा इञ्जिनि`यरका रूपमा काम गरे। दुवईको ५० डि’ग्री से’ल्सियस`मा काम गरेर भारत आएका विनोद अब चिसोमा काम गर्नु`पर्ने भयो, काजकि`स्तानको ताप’क्रम माइन`स ४५ डि’ग्री थियो।
काज`किस्तानमा ८५ तले भवन बनाउनु`पर्ने। चिसोका कारण हिटर नभइ बस्नै नसकि`ने हुन्थ्यो।‘पाँच मिनेट बाहिर बसेर फोन गर्न सक्ने अवस्था थिएन, काममा खटिन पनि चि`सोले दिएन,’ विनोदले भने ।काज-किस्तानमा काम गर्दा काम-दार धेरै थिए। चिसोले गर्दा १५ मिनेट काम गर्ने त्यस-पछि हिटरमा गएर बस्ने गर्दथे। गर्मी याममा पनि १० डिग्री-भन्दा बढी ताप-क्रम नपुगेको उनी सम्झन्छन्। उनले त्यो चिसो खप्न सकेनन्।
व्यापा-रिक केन्द्र बनाउन उक्त भवन बना-एको उनी बताउँछन्। अहिले पनि उक्त भवनको काम सकिएको छैन।त्यहाँ मासिक ३ हजार डलर तलब र बस्न खानका लागि ९ सय डलर अति-रिक्त भत्ता थियो, उनको। यत्तिका कमाई हुँदा पनि चिसो खप्न न-सकेकै कारण ९ महिनामै उनले काज-किस्तानको जागिर छाडि-दिए।
अमेरिका जान काज-किस्तानबाटै पास-पो’र्टमा भिसा लगाए। भिसा मात्र लगाएर के गर्नु? उनले काम गर्न नपाउने भए। पछि अमेरिका गएनन्, बरू नेपाल फर्किए।दुवईमा काम गर्दाका बोस डग हायस उनको सम्पर्कमै थिए। विनोद-लाई मन पराएका बोसले अर्को जागिरको अफर गरे। मले-सियामा विश्वकै दोस्रो अग्लो टावर बनाउन थालि-एको रहेछ। उनले त्यहीं काम पाए।
सन् २०१६ देखि अहिले पनि उनी मले-सियामै छन्। बुर्ज खालिफा पछि विश्वकै दोस्रो अग्लो टावरका रूपमा बनि-रहेको यो टावर १ सय १८ तलाको छ। यही बर्ष-भित्र सक्ने गरी काम भइ-रहेको विनोद बताउँछन्।लेबर भिसामा दुवई पुगेका विनोद-सँग औ’पचारिक शिक्षा पढाउने विश्व-विद्यालयका सर्टि-फिकेट त छैनन्,
तर विश्वका अग्ला र ठूला कम्पनीमा ईञ्जि-नियरिङको काम गरेको अनुभव छ। कम्पनी-हरूले दिएका सर्टिफिकेट र प्रशंसा पत्रहरू छन्।घर-छुट्टीमा पोखरा आएर गत साता मात्रै मले-सिया फर्केका विनोद अहिले काममा खटि-सकेका छन्।‘विदेशमा मैले यति धेरै दु:ख गरें कि, सबै विदेशले सिकायो,’ विनोद भन्छन्, ‘मेरो दु:ख बोसले बुझि-दियो, अहिले-सम्म साथ छाडेका छैनन्।’
दुबईमा दैनिक १२ घण्टा काम गरेर खाना खाँदा पनि अध्यन गरेर बस्ने र भोलि गर्नु-पर्ने कामको तयारी आजै गरेको देखेर बोस छक्क परेको उनी सम्झन्छन्।२०१६ मा घर आउँदा उनले नेपालको सड-कमा पनि केही समय काम गर्न पाएका थिए।
बेनी-बाट मुस्ताङ जाने सडकको बेनी-देखि गले-श्वरसम्मको सडक स’र्भेमा उनले काम गरेको बताए। सरकारी निकायमा काम गर्न उनलाई सर्टि-फिकेट चाहिन्छ। ठेके-दारको आ’ग्रह-पछि कम्पनीको इञ्जि’नियरका रूपमा काम गरेको उनले बताए।
मलेसियामा अहिले बनाइ-रहेको टावरको सिनि`यर ल्याण्ड सर्भेयर बनेर उनले मात`हतमा ६ जना सर्भेयर र हे’ल्पर गरी १८ जना छन्।टावर बनाउँदा सुरूमा ३ सय जना उनी जस्तै प्रावि`धिक थिए भने दिन र रात गरी दुई सिफ्टमा ५ हजार जनाले काम गर्थे। अहिले टावरको काम सकिन लाग्दा का`मदार र प्रावि`धिक आधा कटौ’ती भइ`सकेको उनले बताए।
यस्ता ठूला आयोजना`हरू बनाउँदा सबै`भन्दा जि’म्मेवार ईञ्जि’नियर हुनु`पर्ने रहेछ भन्ने उनले थाहा पाएका छन्।‘ठेकेदारले त जसरी पनि छिटो काम सक्न खोज्छ। ईञ्जि`नियरले साइट नहेरी सही गर्न हुँदैन। डि’जाइन`अनुसार बनेको छ कि छैन, धेरै जिम्मा ईञ्जि`नियरकै हुन्छ,’ उनले भने।
नेपालमा आउँदा विनोदको शैक्षिक योग्यता एस`एलसी फेल हो। तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उनी विश्व-विद्यालयमा पढेर आएका ईन्जिनियर`भन्दा आफू`लाई कम ठान्दैनन्।‘एउटै काममा लामो समय काम गर्दा धेरै अनु`भव हुँदो रहेछ, पढ्न पनि नपर्ने,’ उनले भने, ‘ईञ्जि’नियरिङ`बाहेक मैले अरू काम नै रोजिनँ।’ – यो सामग्री युवराज श्रेष्ठले सेतोपाटीमा लेख्नु भएको छ ।
२०७८ बैशाख ८, बुधबार १९:५९ गते 1 Minute 672 Views